Ribbon Shredder: Ribbon Splitter, Ngwaọrụ Ribbon Curler maka mkpuchi onyinye
Mee ka eriri gị na ụta gị na -agbagharị & ibiaghachi! Ịgbagharị na ịkpụgharị n'ime otu mfe!
Site n'iji ihe eji achọ ihe mpe mpe akwa rịbọn shredder slitters,
ị nwere ike ịme ụta dị iche iche maka ịchọ mma ma mee onyinye pụrụ iche.
Mee Ribbon Mmetụta Pụrụ Iche maka mkpokọta gị / Onyinye nwere RSPAC ™ Ribbon Shredder!!!
RSPACTool ngwa ọrụ ịre ahịa rịbọn bụ nke zuru oke na ntụkwasị obi curl na shred toolkit n'ahịa.
Ngwa Obere, Nnukwu obi ụtọ
The smart kemfe ngwá ọrụ, nwere ike inye aka kewaa ma kpughee ọmarịcha mpe mpe akwa gị site na ịdọpụ naanị. Ka ịgbakwunye ihe ndị ọzọ eji achọ mma na nkwakọ ngwaahịa DIY gị wee mee ka onyinye gị pụọ iche.
Styles dị iche iche & Agba
Dị na otu akụkụ, akụkụ abụọ, nwere ezé ọla ma ọ bụ ezé plastik na mkpokọta 4 ụdị dị iche iche iji gboo mkpa gị, ma ọ dịkarịa ala 4 agba dị iche iche nke nhazi ọ bụla.
Ụdị Ọhụrụ Na -abịa Oge adịghị anya
2 ụdị ọhụrụ ka na -eto eto ma na -agbanwe, ga -adị n'oge adịghị anya. Ọzọkwa, anyị ga -anọgide na -emepe ngwa ngwa rịbọn obere ngwaọrụ, nabata kpọtụrụ anyị.
Anyị raara onwe anyị nye ndị ọrụ anyị & Ngwaahịa
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị na -eme nke ọma n'ịme ihe RSPACRibbon Shredder, Ngwa ngwugwu onyinye kacha zuo oke na ntụkwasị obi n'ahịa.
Wokpu bụ rịbọn shredder?
Ribbon shredder, a na -akpọkwa ya rịbọn curler,rịbọn cutter,rịbọn mini slitting tool,igwe mpe mpe akwa rịbọn, ma ọ bụ rịbọn splitter.
Ọ bụ ngwaọrụ ịgbachi eriri na ịkpụgharị nke ejiri plastik mee yana ahịrị plastik ma ọ bụ ezé ezoro ezo nke ọnụ ọgụgụ dabara adaba na ogologo etinyere n'agba nke elu nke ngwa ahụ.
Enwere ụdị shredder rịbọn dị mma n'ahịa，dị ka: rịbọn shredder nwere ezé ọla,rịbọn shredder na curler,rịbọn splitter na plastic ezé,okpukpu abụọ rịbọn shredder na ngwaọrụ mgbatị,rịbọn slitter,rịbọn shredder akwụkwọ cutter,Ribbon Shredder Curler Tool,wdg.
Na ala agba nke ngwá ọrụ na oghere na -anabata mmiri retainer.
Ngwá ọrụ ejiri aka rụọ iji kpochapụ ọrụ na -agwụ ike na oge achọrọ iji belata ma jiri eriri mee ka eriri kee ya ka ọ bụrụ ihe ịchọ mma.,site na ịpị ya na agba elu na ala, mgbe ahụ naanị ịdọrọ eriri ahụ site na ngwa ahụ.
Ọ haziri ya maka ibelata ihe nke rịbọn poly nke obosara nke mbụ ka ọ bụrụ ọtụtụ nke eriri rịbọn nke obere obosara gụnyere.,wee tụgharịa maka imecha mma. dị ka ejiri na ngwugwu ihe onyinye na ihe, ebe enwere ike ime eriri eriri ka ọ chọọ mma karịa site n'iji ya eme ihe.
Ngwa ọmarịcha Ribbon Shredder Tool UK Video Full HD 1080p | Honstar Onyinye Wrapping Co., Ltd..
Ngwaọrụ dị ịtụnanya na -enyere aka imepụta onyinye pụrụ iche & Ihe ijuanya
Obere nha na ịdị mfe maka ijigide na iji ya dị mfe
Ịtụnanya “eze” nke shredder maka otu ihe dị mfe
Iji chọọ onyinye ekeresimesi mma site na iji curling na mmetụta rịbọn pụrụ iche
Ime shred maka nkata akwa Ista ma ọ bụ onyinye nri ọ bụla ọzọ
Kewaa rịbọn n'ime eriri balloon maka ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ oriri agbamakwụkwọ
Anyị na -enye shredders kacha mkpa na ntụkwasị obi n'ahịa
N'elu 70,000 Ndị ọrụ, Ka anyị hụ ihe ụfọdụ ndị ga -ekwu?
Anyị hụrụ ndị ọrụ anyị n'anya ma rara onwe anyị nye idobe ntụkwasị obi ha
na -enye ngwaahịa dị ịtụnanya yana nkwado pụtara ire!
Dị egwu!!!!!!!!!!!!!!Ka ọ dị ugbu a, shredder kacha mma m nwetụrụla. Ukwuu nwere ike ikwu. Ị gaghị ama jijiji mgbe ị na -eme ihe mkpuchi gị ọzọ.
Enwere m afọ ojuju maka arụmọrụ ngwaahịa na mbufe ngwa ngwa! Ana m akwado ngwaahịa na onye ahịa.
Lourdes nke S.
Na -arụ ọrụ nke ọma. Naanị soro ndụmọdụ nke nyocha ndị ọzọ na …Na -arụ ọrụ nke ọma. Naanị soro ndụmọdụ nke nyocha ndị ọzọ wee tinye “eze” nke shredder n'elu rịbọn.
Lila na -agbagharị
RSPAC Ribbon Shredder bụ Klọọkụ Ihe Mgbakwunye Onyinye Kits na Kredit Kredit kacha ewu ewu! Anyị bụ ụlọ ọrụ!!
Bịa na atụmatụ dị egwu, “ezé” adịchaghị mma maka ịdọpụ, na -egbuke egbuke agba, Nhọrọ ụdịdị dị iche iche & ọtụtụ ihe ndị ọzọ!